GIS Pro Barnaamijka GIS ee ugufiican iPad? - Geofumadas
Disember, 2013 Apple - Mac, Geospatial - GIS, SuperGIS, topografia
Toddobaadkii hore waxaan la hadlay saaxiibkey reer Kanada ah oo ii sheegay waxa ku saabsan khibrada ay u leeyihiin isticmaalka GIS Pro ee hababka sahaminta cadastral. Waxaan kudhowaadnay inaan soo gabagabeyno in kastoo ay jiraan aalado kale, laga soo bilaabo waxa ku jira App Store tani waa hadaanay ugu fiicneyn macruufka, midka sida ugu fiican isu taagay doorbidida dadka isticmaala mobilada; oo waxaan idhi iPad maxaa yeelay inkasta oo uu ka shaqeeyo iPhone, cabirka shaashadda ayaa xaddidaya waxtarka laga heli karo iPad mini ama iPad caadi ah.
Hadda, SuperSurv la sii daayo ay version ugu horeysay waxa ay lahaayeen in ay Android, waxaan doonayaa in aan ka hadlaan wax yar oo ku saabsan Pro GIS, oo waxaa la siin doonaa in ay leeyihiin doonaan in ay u tartamaan haddii ay doonayaan in laga gudbo dadka isticmaala SuperGIS Desktop suurto gal horay u isticmaali SuperPad , SuperField ama SuperSurv ee Android.
GIS Pro ayaa ku filan tan, iyada oo awood u leh inay soo dejiso faylasha shp, gpx, kml iyo kmz. Xaddiddiisu waxay ku jirtaa iswaafajinta maaddaama aysan ahayn soo saaraha desktop ama qalabka adeegga; Waad u dhoofin kartaa isla faylasha, marka lagu daro csv laakiin halkan SuperSurv ayaa ka faa'iideysan kara xaqiiqda akhrinta xogta ay soo saartay SuperGIS Server maahan oo keliya WMS laakiin sidoo kale WFS-T. Hadday sidaas tahay, -waxaan rajeynayaa- marka laga reebo xogta xogta xogta, waxaan ka shaqayn karnaa xakamaynta koontaroolidda dhaqdhaqaaqa iyo sharciyeynta bukaanka lagu kaydiyo xogta; ma aha oo kaliya SuperGIS Server laakiin ArcSDE ama Oracle Spatial.
Qalabkan GIS waa mid kooban, sababtoo ah iyada oo la adeegsanayo iTunes / email ma ahan mid isdhaafsi ah laakiin isugeyn lagu wareejiyo faylasha oo leh kantarool adag. saaxiibada Our ka Kanada ay awoodaan si ay u sameeyaan habka of kaydinta Geodatabase ah lagu sameeyo ArcSDE sida version Pro keentaa fursad u wadaaga fasalada feature daruurta, inkasta oo ay tani qaadataa waayo-aragnimo dheeraad ah oo aan ahayn ku haboon ee wax soo saarka bixiyaa u maleynayo in loo jeedo.
Waxaan cadeynay in adeegsadayaasha sameeya sahaminta nooca cadastral-ka ah, aag aan horay looga baran, wareejinta feylasha caadiga ah ayaa kufilan maxaa yeelay hadhow waxaa jira shaqo farsamo yaqaanno GIS ah kuwaasoo nadiifin doona xogta isla markaana dhexgelin doona macluumaadka jira. . Laakiin marka la eego dayactirka cadastral, waxa ku lug leh ayaa ah kala qaybinta guryaha, kooxaysi ama hagaajin, taas oo qalabku illaa hadda ka gaabiyo. Caqabada ayaa ah in la sameeyo inta udhaxeysa shan ilaa toban qalab oo u oggolaanaya saddex geesoodka, cabbiraadda saa'idka, masaafada, ku riix si dhakhso ah, abuur isbarbar dhig, ansaxitaan topology iyadoo kuxiran habka cabirka asalka ah, iwm. Waan arki doonaa waxa SuperSurv ay bixiso Janaayo 2014.
Sida khariidadaha taariikhda, GIS Pro waxay taageertaa sawirrada Google iyo Bing, in ka badan intaas. Intaa waxaa dheer, Khariidadda OpenStreet, OpenTopo, waddada Google / Bing iyo adeegyada WMS. Tan dhexdeeda caqabadda waxay ku jirtaa sawirrada maxalliga ah ee lagu kaydiyay iPad-ka, maaddaama cabbirka xusuusta aan la qaadan karin laakiin dhaqanka ayaa ku qasbaya. Dariiq ayaa loo baahan yahay in la helo si loogu maareeyo kaydka hab ka waxtar badan kan jira illaa maanta, oo laga fikiray adeegsadaha u baahan inuu tago garoonka oo xirto lakab offline aan lagu badbaadin, lakulmay iCloud iyada oo la eegayo shuruudaha sahan; leydiin, wadada la duubay, wareega saamaynta dhibic.
SuperSurv tan waa inay ku faaftaa ugu yaraan adeegyadan oo ay aragtaa haddii ay wax u qabtaan sida waxa GaiaGPS u qabato, taas oo inkasta oo ay diiradda saareyso raadinta, maareynta kaydku xoogaa way ka duwan tahay oo waxoogaa way ka fiican tahay GIS Pro. SuperSurv wuxuu awood u yeelan doonaa inuu akhriyo foornada lagu abuuray SuperGIS Server iyo waliba feylasha qaab stc ah oo lagu sameeyay aaladda dusha khariidada ee SuperGIS Desktop, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la arko in kmz oo leh orthophoto gundhig leh la maareyn karo iyadoo aan dulqaad la’aan la helin.
Waxaan cadeynay in qalabka moobiilku uusan waligood fileynin in la sameeyo waxa isticmaalaha ka shaqeeyo desktop-ka, laakiin waxaa jira waxqabadyo aan ku sameynay GPS kahor intaysan helin shaashad hodan ah oo lumaya. Waxaan xasuustaa Garmin-kii ay xiisaha laheyd qabashada dhibcaha iyo tixraaca khariidada asalka; hadda wax badan ayaa la qabanayaa laakiin waxay umuuqataa inaan ku wareegeyno wax badan si aan u qabanno howlo fudud sida qabashada dhibic iyo isbarbar dhigga mid jira.
Hawlaha GIS Pro way yar yihiin, waxaana dhihi karnaa ku filan abuurista lakabyada, daminta, daarida, nuqul ka sameynta, dib u habeynta iyo abuuritaanka daah furnaan. Waan ogolahay laakiin waxaan u maleynayaa in lagu hagaajin karo caqliga isticmaalaha; sida loogu beddelo qaababka xariiqa, dhumucda ama cabbirka dhibic iyadoo loo adeegsanayo hab fudud. Ilaa xad, isticmaalka faraha kale ee shaashadda ayaa lumay, sida, tusaale ahaan, taabashada astaanta meeniska oo leh hal far iyo labada kale oo awood u leh inay muujiyaan isbeddelada aasaasiga ah ee la soo bandhigi karo oo keliya oo ay tahay inaadan ka tegin shaashadda si aad u gasho xakamaynta sheybaarka.
Haddii SuperSurv doonayo in uu la tartamo arrintan, waa inuu ka faa'iideystaa waxa uu Android samaynayo isla laakiin IOS leh hal, laba, saddex iyo afar farood.
Dhibaatada saxsanaanta waxay ku jirtaa xaddidaadda qalabka, sidaas darteed gps-ka uu iPad-ku keeno. Ma aqaano sida ay u sameeyeen asxaabta GIS Pro, laakiin nooca pro wuxuu u oggolaanayaa sax ka fiican kan fudud ee mitirka 3-mitir; Waa suurtagal in la qeexo saxnaanta iyo shaandhada saxda ah ee saxda ah si aysan u qabsanin inay qabato mooyee. In kasta oo ay qabato, haddana waxay ila tahay inay caqabad ku tahay hadda wixii ka dambeeya codsiyada moobiilka; sida loo gaaro saxsanaanta iyada oo aan loo baahnayn 4G, iyadoo laga faa'iideysanayo isku xirnaanta saldhigyada go'an ee loo maro serverka ... haddii kale, iyadoo la adeegsanayo dib-u-shaqeyn. Dhibaatada GIS Pro ayaa ah in saxsanaantan aan la caddeyn, waxay kuxirantahay doorsoomayaal badan; Tani muhiim kuma aha mashruucyada leh qorshe dhul adeegsiga ama habka isticmaalka dhulka, laakiin waa mid qaab sharci ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan u arkaa inay tahay waxa ugu wanaagsan ee GIS Pro sameeyo -ugu yaraan bixinta-.
Hada ma sahlana in la hubiyo, laakiin waxay ku fiicnaan laheyd in lagu soo ururiyo xog isku xaalad ah Ipad iyo Android, isla mar ahaantaana, qalabka 'GIS Kit' iyo 'GIS Pro' ka dibna la isbarbar dhigo hadday runti run ka tahay saxnimada ... sidaas awgeed, in waddamada isku xirnaanta aysan iswaafaqsaneyn. Haatan waxaan ku ciyaari doonaa nooca aan ka helay SuperSurv waxaanan isbarbar dhigayaa GIS Kit, halkaasna waan kuugu sheegayaa.
Waxaan ka shakisanahay in SuperSurv ay wax badan u leedahay saxnaanta, inkasta oo ay si fiican u sameeyaan SuperPad oo leh GNSS kordhin ... dabcan, GPS oo taageera Windows Mobile.
Muxuu GIS Pro u leeyahay aqbalitaan wanaagsan?
Kama jawaabi karno in tani ay tahay codsiga ugu fiican ee GIS ee iPad, laakiin waxay u muuqataa mid macquul ah, ka dib markii la tashaday isticmaalayaal kala duwan oo jecel, waxaan u imid go'aanka ah shaqadiisa fudud ee macmiilayaasha jecel «ma khabiiro GIS«, Ugu yaraan maahan GIS lahaansho. Waxaan ula jeedaa, dadka isticmaala ESRI waxay isticmaali doonaan ArcPad, Supergis SuperSurv, Bentley Navigator Pano… laakiin cidda aad u rabto:
Abuuri fasallo muusiko ah oo kiniin ah
Qeexaan isu-ururinta nooca calaamadaynta, xariiqda, farsamo, wadada
Deji muuqaalada sida sawirka, calaamadda, qoraalka, liiska qiimaha
Deji miiraha qabashada waqtiga, masaafada, saxnaanta iyo saxsanaanta heer sare ah
Maareynta xogta Latitude / dheer, UTM, MGRS iyo nidaamka USNG
Ku dhaji raajada asalka ah / lakabka wadada
La wadaag fasalada muqaalka ah ee iCloud
iyo waxan oo dhan adigoon isticmaalin qalab desktop ah ...
Hubinta GIS Pro ayaa aheyd doorashadaada.
Haddii goobaha kale ay rabaan inay la tartamaan GIS Pro ... waxay bilaabaan iyagoo baaraya sida ay u sameeyeen saxnimada ultra.
Post Previous" Hore Brazil oo indhaha ku haysa "Sannadka Kaabayaasha" ee soo socda "
Post Next Abuur khariidad doorasho oo leh Fusiontable - 10 daqiiqo gudahoodNext »
2 Jawaabta "GIS Pro Barnaamijka GIS ee ugu Fiican iPad-ka?"
Waxyaabaha fiican ee codsiga ayaa kuu shaqeynayey.
Waxaan haystaa laba sano oo isticmaalaya pro Giskit, oo waa intuititiva app aad u horumarsan oo u maaraysay fududahay users aqoon yar GIS, maamulka geotif waa si fiican dheecaan, shapefile ka fududahay in ka qaadaan by mail iyo DropBox. Waxaa jira waxyaabo badan oo la sheego. Iyadoo lagu talinayo boggan waxaan soo iibsaday app this.